Dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga la bixinayo shatiyada shidaal baarista - Halbeeg News
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga la bixinayo shatiyada shidaal baarista
MUQDISHO(HALBEEG)-Kadib horumar ballaaran oo ay dowladda Soomaaliya ka sameysay qorshaha qaab dhismeedka iyo sharciyada soo saarista shidaalka Soomaaliya wasiirka batroolka iyo macdanta ayaa markii ugu horeysay ku dhowaaqay daahfurka shati bixinta shidaal baarista Soomaaliya.
7-da bisha Febraayo ee sanadka soo socda ayaa loo qorsheeyay in ay London ka dhacdo xafladda daahfurka shati bixinta shidaal baarista Soomaaliya halkaa oo uu wasiirka Batroolka iyo Kheyraadka xukuumadda federaalka Soomaaliya uu xarigga ka jari doono qeybtii ugu danbeysay oo la filayo in ay ka koobanaato 50 baloog oo baaxad ahaan la’eg 173,000 oo kiilo mitir laba jibbaaran.
Inta ay socota xafladda xarig jarista ayaa lagu wadaa in daaha lagaga rogo shuruucda iyo xeerarka shidaalka, awoodda suuqyada gudaha, shuruudaha maaliyadda iyo shuruuc kale.
Dhacdadan ayaa la filayaa in sidoo kale lagu soo bandhigo casharro ku saabsan jiyoolajiga oo laga diyaariyay baloogyada furan waxaana la qorsheeyay in uu barnaamijka soo xirmo 11-ka bisha Luuliyo ee sanadka soo socda.
Waxaa la qorsheynayaa in barnaamijyada loo sameeyo olole lagu xayeysiinayo kuwaa oo ka dhici doono magaalooyinka Hiyuustan iyo Dubai.
Shirka Maayarrada dalalka Islaamka oo Jabuuti ka furmaya